နေဘုန်းလတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အမတ်
(1980-06-28) ၂၈ ဇွန်၊ ၁၉၈၀ (အသက် ၄၀)
သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ
PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award
မောင်နေမျိုးကျော် (ကလောင်အမည် နေဘုန်းလတ်) သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာအဆင့်အထိ နာမည်ကြီးသွားသော စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သံလွင်အိပ်မက် အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်း၏ အယ်ဒီတာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ မီဒို (MIDO) အဖွဲ့အစည်းတွင်လည်း ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသူဖြစ်သည်။
နေဘုန်းလတ်ကို ဖခင် ဦးသိန်းထွန်း၊ မိခင် ဒေါ်အေးအေးသန့်တို့မှ မွေးဖွားသည်။ အ.ထ.က(၆)ဗိုလ်တထောင်တွင် သူငယ်တန်းမှ ဆယ်တန်းအထိ တက်ရောက်သင်ကြားပြီး ယင်းကျောင်းမှပင် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာအထက်တန်းကို နှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် စက်မှုတက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်သင်ကြားပြီး ယင်းကျောင်းမှပင် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာအထက်တန်းကို နှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် BE(Civil) ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှစပြီး ကဗျာရေးသားခြင်း၊ စာရေးသားခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် စံပယ်ဖြူမဂ္ဂဇင်းတွင် အကျိုးပြုစာပေများ စတင်ရေးသားခဲ့သည်။
၂ အကျဉ်းကျခံ မှတ်တမ်း
၃ အကျဉ်းကျခံဘဝမှ လွတ်မြောက်ရန်
၄ ရရှိခဲ့သည့် ဆုများ
နေဘုန်းလတ်သည် ဘလော့ဂါ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော် ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားကာ ဘလော့လောကတွင် စာစတင်ရေးသားခဲ့သည်။ သူသည် သံလွင်အိပ်မက် အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်း၏ အယ်ဒီတာလည်း ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်ဟာ အနုပညာကိုခုံမင်ရူးသွပ်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ …။ နေဘုန်းလတ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ကဗျာတွေ၊ စာတွေရေးတယ် …။ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာ အချို့မှာ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ စာတွေကိုတွေ့နိုင်သလို ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော် ... လေးမှာလဲ ကျွန်တော့်ရဲ့အနုပညာတွေကိုခင်းဖြန့်ချပြ ထားပါတယ်။ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင် ရုပ်ရှင်မင်းသားအလုပ် ကလွဲလို့ ကျန်တာ အကုန်လုပ်ချင်နေတဲ့ သူဆိုတော့ အရင်ကဆို သူများကင်မရာတွေခဏငှားငှားပြီး ဟိုဟိုဒီဒီသွားတဲ့အခါ ဓာတ်ပုံတွေလျှောက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဟာလဲ ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ နောက်ထပ်မြို့တော်တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုတော့ ပိုက်ဆံလေးနဲနဲပါးပါးစုမိလို့ ကိုယ်ပိုင်ကင်မရာလေးတစ်လုံး ဝယ်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေကို အရင်ကထက်ပိုပြီးရိုက်ဖြစ်တော့မှာဖြစ်လို့ ဘလော့ဂ်အသစ်လေး တစ်ခုကို စလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ...။ အလင်းနဲ့ရေးတဲ့ပန်းချီ ... မှာ ကျွန်တော် ကင်မရာလေးရဲ့အကူအညီကိုယူပြီး အလင်းတွေနဲ့ ရေးခြစ်ထားတဲ့ ပန်းချီကားချပ်လေးတွေကို တွေ့မြင်ခံစား နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ် … ကျွန်တော်ဟာ အနုပညာကိုခုံမင်ရူးသွပ်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု သူ၏ ဘလော့တွင် ဖော်ပြထားသည်။ 
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် နေဘုန်းလတ်သည် နေအိမ်မှ အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် ခဏတာ ဖမ်းဆီးခံထားခဲ့ရပြီးနောက်၊ အင်းစိန်ထောင်ရှိ အကျဉ်းထောင် အဆောင် ၁ တွင် ဆက်လက် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် သူ၏ ကိုယ်ပိုင် ရှေ့နေမှ နေဘုန်းလတ်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ပေးရန် အကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူများသို့ လျှောက်ထားခဲ့သည်။ အဖမ်းခံရပြီး နှစ်ပါတ်အကြာတွင် အပါတ်စဉ် တနင်္ဂလာနေ့တိုင်း မိသားစုဝင်များနှင့် ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ မိခင် ဒေါ်အေးသန်းသည် နေဘုန်းလတ်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရသည့်နေ့တွင်၊ နေဘုန်းလတ်မှ သူ့အား အကျဉ်းထောင်အတွင်းတွင် စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းများ နှစ်ကြိမ်တိုင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သူ၏ မိခင်ကို ပြောကြားခဲ့သည်။ သူ၏ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ နှင့် ပါတ်သက်သော မေးခွန်းများ နှင့် အခြား လျို့ဝှက်အမည်များဖြင့် ဘလော့ရေးသားခြင်း ရှိမရှိ ၊ အခြား မူရင်းအမည်များဖြင့် ရေးသားနေကြသည့် စာရေးဆရာမ မေငြိမ်း၊ ဒေါက်တာလွမ်းဆွေ အစရှိသည့် ဘလော့ဂါများကို သိကျွမ်းခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း မေးမြန်းခြင်းခံရသည်ဟု ဆိုသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ဗီဒီယိုအက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂(ခ) မှ အရေးပေါ်စီမံချက် နိုင်ငံရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅(ည) သို့ ပြောင်းလည်း၍ ဖမ်းဆီး စွဲဆိုထားခဲ့ကြောင်း မိခင်နှင့် ထောင်ဝင်စာ တွေ့ချိန်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
နေဘုန်းလတ်သည် ရွှေဝါရောင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု အပြီး ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွင်းမှာ အီလက်ထရောနစ် ပုဒ်မနဲ့ ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂ဝ ကျော် ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် အယူခံဝင်ခဲ့ရာမှာ ပြစ်ဒဏ်ကို ၁၂ နှစ်အထိ ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်အရ ပြစ်ဒဏ် (၁) နှစ် လျှော့ပေါ့ခံရပြီး ဘားအံအကျဉ်းထောင်မှာ ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ် ကျခံနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အကျဉ်းကျခံ ဘဝမှ လွတ်မြောက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ http://freenpl.blogspot.com/ ဘလော့တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ နေဘုန်းလတ် လွတ်မြောက်ရေး၊ Free Nay Phone Latt အမည်ကို အတိုကောက် Freenpl အဖြစ် အမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဘလော့တွင် သူ၏ မိခင်မှ ပေးစာများ၊ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ နေဘုန်းလတ်ကို ချစ်ခင်ကြသော လူပုဂ္ဂိုလ် အသီးအသီးတို့ မှ ကဗျာများ၊ စာပေများ နေဘုန်းလတ် လွတ်မြောက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ရေးသားပေးပို့ကြသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ကိုနေဘုန်းလတ် ၏ ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော် ဘလော့ဂ် စတင်ရေးသားခြင်း တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် မြန်မာဘလော့ဂါများ စုပေါင်းရေးသားထားသည့် အမှတ်တရ post တစ်ခုကို ဆင်တူလွှင့်တင်ထားခဲ့ကြသည်။ နေဘုန်းလတ်သို့ ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည့် အဆိုပါ post တွင် ကိုနေဘုန်းလတ်၏ ဘလော့ဂ်အကြောင်း၊ သူဖြတ်သန်းခဲ့သည့် ဘလော့ဂါဘဝနှင့် ရေးဖေါ်ရေးဘက်များက သတိတရရှိနေကြောင်းကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသာ ဖေါ်ပြထားခဲ့သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်တွင် နေဘုန်းလတ်သည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အကျဉ်းသားများ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး၍ ပြန်လည်လွှတ်ပေးရာတွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် နေဘုန်းလတ်အား PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award ဆုအား ချီးမြှင့်ခဲ့သည်၊ ၎င်းဆုသည် “ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို သတ္တိရှိစွာ တိုက်ပွဲဝင်ကြသည့် စာရေးသူများ”အတွက် ဖြစ်သည်။
↑ Account Suspended. Myanmarisp.com. Retrieved on 2014-02-09.
↑ "Burma prisoner amnesty – Hla Hla Win walks"၊ Democratic Voice of Burma။ 2012-1-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award။ PEN American Center (2012)။ 17 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နေဘုန်းလတ်&oldid=490420" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၁:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။